Gareen Biyya Islaamaa (ISIS) maallaqa isaa qopheessuuf murteeffate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Gareen Biyya Islaamaa (ISIS) maallaqa isaa qopheessuuf murteeffate
Gareen Biyya Islaamaa (ISIS) maallaqa isaa qopheessuuf murteeffate
Gareen Biyyoota Islaamaa (ISIS) jedhamuun beekamu seera diinagdee addunyaa harka biyyoota dhihaatti kufe geeddaruun dirqama jedha. Kanaaf ISIS barbaachisummaa omisha maallaqa isaa labse. Akka labsa dura taa’aa garee kanaa kan ta’e Abuu Bakar el Bagdaadiitti, maallaqni seera fi diinagdee biyyoota dhihaa irratti bu’uureffaman ‘musilimoota gabroomfateera’.
Labsiin maallaqa haarawa tolchuu Mana Maree Shuuraatiin raggaasifamee, ajajni maallaqa omishuu kanneen dhimmi isaan ilaallatutti kennameera. Maallaqni kunis worqee, birrii fi meeta irraa akka tolfamuudha kan hubatame. Maallaqani kunis gosa saantima 7 kan qabuudha: worqee 2, birrii 3 fi meeta 2.
garee biyyoota islaamaa
Previous articleQorannoon Uumama Samii fi Lubbuu Boqonnaa Haarawa Seene
Next articleBunni faaydaa fayyaa heddu qabaachuun isaa beekame